प्रेम आले भ्र’ष्टाचारी खाेज्दै, पुगे एयरपाेर्ट : पर्यटन वाेर्डका सिइओ रेग्मि रंगेहात प-क्राउ, धेरैकाे भागा-भाग – Points Nepal
प्रेम आले भ्र’ष्टाचारी खाेज्दै, पुगे एयरपाेर्ट : पर्यटन वाेर्डका सिइओ रेग्मि रंगेहात प-क्राउ, धेरैकाे भागा-भाग
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ०९, २०७८ समय: १३:३९:५६
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका सिइओ धनन्जय रेग्मीले बेलायतबाट फर्किदा भन्सारमा रक्सी काण्ड मच्चाएकोमा छान’विन समिति नै गठन भएपछि, उनले माफी मागेका थिए ।
तर रेग्मीले भन्सारबाट नियमविपरित रक्सीमात्र होइन यसअघि सुन पनि भित्र्याउन खोज्दा जफत भएर जरिवाना तिरेको खुलेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले रेग्मीले अ’वैध रुपमा चो’री पैठारीगरी ल्याएको ३० ग्राम सुन जफत गरेर जरिवाना गरिएको जानकारी दिएको छ ।
भन्सार कार्यालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणमा २०७४ पुस ९ गते विस्कुट आकारका तीन थान सुनका डल्ला जफत गरिएको र बिगो बमोजिम एक लाख ४० हजार ६८५ रुपैया जरिवाना हुने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
रेग्मी कतार एयरलायन्सको उडानबाट नेपाल आउँदा अवैध रुपमा सो सुन ल्याएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । रेग्मीमाथि छानविन भइरहेका बेला मन्त्रालयले रक्सी काण्डबारे विवरण माग्दा भन्सार कार्यालयले अवैध रुपमा सुन ल्याउँदा कारवाही भएको जानकारी दिएको हो ।
रेग्मीले ल्याएको सुन प्रकरणमा मुद्दाको किनारा भने २०७७ भदौमा लागेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि गत पुसमा फेरि रक्सीको लफडा निस्किएको हो ।
रेग्मीले भन्सार नियमविपरित रक्सी भन्सारबाट छिराउन खोज्दा कर्मचारीसँग झगडा परेको थियो । त्यसक्रममा भन्सार कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरेको भनी रेग्मीमाथि छानविन समेत भएको थियो ।
यसबीचमा रेग्मीले बोर्डमा अनियमितता गरेको भन्दै पर्यटन बोर्डले छानविन समिति गठन गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.धनन्जय रेग्मी र भन्सारका कर्मचारीबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । यस विषयलाई लिएर पर्यटन मन्त्री प्रेम आले मगरले बोर्डका सिइओ रेग्मीमाथि तीन दिने लिखित स्पष्टीकरण मागेका छन् ।
यही घ’टनालाई लिएर पर्यटन व्यवसायीहरुले बोर्डका सिइओले मदिराको नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीमाथि गरेको व्यवहार लाजमर्दो र निन्दनीय भएको सार्वजनिक रुपमा नै बोल्न थालेका छन् ।
यस घ’टनाले नेपालका पर्यटन व्यवसायीमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले ग:लत नै हो, भने बोर्डका सिइओ रेग्मीमाथि कार’बाही गर्न माग गरेका छन् ।
ट्रेकिङ एजेन्सिस् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पूर्वअध्यक्ष नवराज दाहालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘गलत गर्नेलाई कारबाही गरियोस । केही दिनअघि नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा मदिराको विषयमा नेपाल पर्यटन बोर्डको सिइओ र विमानस्थल भन्सार कर्मचारीबीच भएको घटना लाजमर्दो र निन्दनीय छ । सम्बन्धित निकायले तत्काल सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर गलत गर्नेलाई कारबाही गरियोस।’
अर्का पर्यटन व्यवसायी कमल सापकोटाले लेखेका छन्,‘पर्यटन व्यवसायी साथीहरु, अग्रजहरु हालै पर्यटन बोर्डका सिइओ र विमानस्थलको कर्मचारीबीच मादक पदार्थका बारेमा मनमुटाव भएको रहेछ । पर्यटन बोर्डका सिइओले कर्मचारीलाई हातपात समेत गरेको समाचारहरु आएका छन् । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न गएको सम्मानित संस्थाका प्रमुखले नै यस्तो क्रियाकलाप गरेको सुन्दा समग्र पर्यटन व्यवसायीको शिर निहुरिएको छ । सत्य तथ्य के हो ? पर्यटन बोर्डका सिइओले पर्यटन क्षेत्रलाई जानकारी गराउनु पर्दछ ।’
पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशिल पर्यटन व्यवसायी ऋषि भण्डारीले लेखेका छन्, ‘पर्यटन व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा प्रचार प्रसारको जिम्मा लिएका पर्यटन बोर्डका सिइओ धनजन्य रेग्मीले राम्रै प्रचार प्रसार गर्नु भएछ ।’ भिन्न प्रचार प्रसारको उदाहरण प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले व्यंग्य गरेका छन् ।
नेपाल पर्वतरोहण संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले यस घटनालाई सकरात्मक पनि लिन सकिँदैन नकारात्मक भन्न पनि नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
विमानस्थलमा आफ्नै नियम र नीति भएका कारण सबै यात्रुलाई लागू हुने भएकाले ठूलालाई छुट नहुने उनको भनाइ छ । तर, विमानस्थलभित्र केही कमी कमजोरी नभएको होइन । यी विषयलाई पनि विमानस्थलका कर्मचारीले मनन गर्नु पर्ने गुरुङको तर्क छ ।
यद्यपि यो घटनाको दुवै पक्षले आत्माबोधसहितको समीक्षा गर्दै प्रोपोगाण्डको रुपमा अघि बढाउन कुनै औचित्य नभएको गुरुङको टिप्पणी छ ।
पर्यटन व्यवसायीले बोर्डका सिइओको समर्थनभन्दा धेरैले व्यापक आलोचना गरेका छन् । विमानस्थलबाट ६ बोतल रक्सीका लागि पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख व्यक्तिले विमानस्थलको कर्मचारीलाई हातपात गर्नु र पाँच हजार जरिवाना तिर्नु सकारात्मक सन्देश नभएको पर्यटन व्यवसायीहरुको टिप्पणी छ ।
लण्डनमा आयोजना भएको विश्व ट्राभल मार्टमा सहभागी भएर पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेसँगै नेपाल फर्किएका सीईओ रेग्मी भाई टिकाको दिन बिहान फर्किएका थिए ।
विमानस्थलमा अवतरण भएपछि कर्मचारीको तुच्छ व्यवहार र बोली सहन नसकेपछि आफूले आवाज उठाउदा मापसे गरेको भन्दै आफूलाई आरोप लगाएको उनले बताएका थिए ।
पर्यटन मन्त्री आले र मन्त्रालयका सचिवलाई यस घटनाको विषयमा मौखिक जानकारी दिइ सकेका सिइओ रेग्मीले छिटै लिखित स्पष्टिकरण बुझाउने तयारी गरेका छन्।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल पर्यटन बोर्डको सिइओमा रेग्मी नियुक्त भएका थिए । अन्तर्मुखी स्वभावका रेग्मीलाई ‘विमानस्थलको रक्सी काण्ड’ ले देउवा सरकारको ‘एक्सन ओरिन्टेड’ मन्त्री आलेले के गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ।
रेग्मी काे हुन कसरी कमाए अरबाैँ याे पढ्नुस
पर्यटन बोर्डको सिइओमा डा.धनन्जय रेग्मी
पर्यटन बोर्डको सिइओमा डाक्टर धनन्जय रेग्मी नियुक्त भएका छन्। पर्यटन बोर्डको संचालक समितिको बैठकले मंगलबार रेग्मीलाई बोर्डको सिइओमा नियुक्त गरेको हो। उनले ४ वर्ष पर्यटन बोर्डको नेतृत्व गर्ने छन्।
डाक्टर रेग्मी १७ जना प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै सिइओ बनेका हुन्।
पर्यटन बोर्डले गत मंसिर १८ मा सिइओको लागी आवेदन माग गरेको थियो।जसमा १७ जनाको आवेदन परेको थियो।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय, बोर्डका संचालक समिति सदस्य विप्लव पौडेल र कृष्णबहादुर महरा सहितको छनौट समितिले १७ जनाबाट पहिलो चरणमा ९ जना छनौट गरेको थियो।
छनौट समितिमा दुई विज्ञका रूपमा पूर्व पर्यटनसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पर्यटन व्यवसायी सागर पाण्डे थिए।
छनौट समितिले १७ जनाबाट पहिलो चरणमा ९ जना छनौट गरेको थियो। उनीहरुको प्रस्तुतीको आधारमा गतहप्ता तीन जनाको नाम संचालक समितिमा पठाएको थियो।
बोर्डले संचालक समितिमा पठाएको सूचीमा धनन्जय रेग्मी, दीपक बस्ताकोटी र हिक्मतसिंह ऐर थिए । सबैलाई उछिन्दै रेग्मी बोर्डको सिइओ नियुक्त भएका हुन्।
निवर्तमान दिपकराज जोशीको कार्याकाल सकिएपछि गत मङ्सिर १८ गते विज्ञापन खुलाइएको थियो । विज्ञापनपछि १७ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
त्यसमध्येबाट उपसमितिले काशिराज भण्डारी, दीपक बस्ताकोटी, दीपकराज जोशी, डा. धनञ्जय रेग्मी, नवीन पोखरेल, बच्चुनारायण श्रेष्ठ, रोहिनीप्रसाद खनाल, सन्तोषविक्रम थापा र हिकमत सिंह ऐरको नाम छनोट गरेको थियो।
को हुन् डा‍ रेग्मी?
लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रको अनुसन्धानमा क्रियाशिल डाक्टर धनञ्जय रेग्मी पर्यटन क्षेत्रमा पनि संलग्न छन्।
विसं २०३२ सालमा स्याङ्जामा जन्मिएका रेग्मी नेपालको प्रख्यात हिमाली भु–वैज्ञानिक र हिमनदी विज्ञ हुन्। उनले नेपालको हिमाल, हिमताल र हिम नदि र हिमाली क्षेत्रहरुको बारेमा अनुसन्धान गरेका छन्।
६ वर्ष कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको वातावरणीय अनुसन्धान गरेर रेग्मीले सोही विषयमा सन् २००६ मा जापानको सापोरो स्थित होक्कााइदो विश्वविद्यालयबाट ‘माउन्टेन इन्भारोमेन्टल जिओ साइन्स एण्ड जिओलोजिकल’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन्।
त्यसअघि उनले बुढानिलकण्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भुगोल विषयको शिक्षकको रुपमा समेत काम गरेका थिए।
रेग्मीले सोपोरो कै नोडल संस्थाको विश्वव्यापी भुपी परियोजना अन्तर्गत पोस्ट डक्टरेट अनुसन्धान फेलोको रुपमा समेत काम गरेका छन्। उनले अमेरिकाको एरिजोना विश्वविद्यालयबाट डेन्ड्रेक्रोनोलोजिकल विषयमा तिन महिने कोर्स पनि गरेका छन्।
हाल काडमाडौं तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत भुगोल तथा वातावरण केन्द्रीय विभागमा केन्द्रिय गेस्ट लेक्चर समेत छन्। साथै उनी, भौगोलिक समाजका उपअध्यक्षका रुपमा समेत कार्यरत छन्।
सन् २००७ देखि सोसाइटी फर इकोलोजिकल रेस्टोरेशन नेपालका अध्यक्षको रुपमा मौसम परिवर्तन र इकोलोजि रेस्टोरेशनका लागि काम गरेका छन्। उनी हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसन र हिमालयन रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष पनि हुन्।
यसअघि रेग्मी इम्जा हिमतालको जोखिम व्यावस्थापन गर्न नेपाली सेनासँग प्रविधिक सल्लाहकारको रुपमा समेत कार्यरत थिए।
इम्जा हिमताल फुट्ने जोखिम भएपछि सरकारले उक्त हिमतालको गहिराइ घटाएको थियो। जुन परियोजना सफल रुपमा सम्पन्न भयो। हाल उनि तालबाट हाइड्रोपावर उत्पादन गरेर तालको पानी घटाउने नयाँ प्रविधिहरुमा काम गरिरहेका छन्।
Last Updated on: January 27th, 2022 at 9:07 am
८४९ पटक हेरिएको